अधिकार नदिँदा कर्मचारी अन्योलमा
पालगन्ज-प्रदेश सरकारले भेटरेनरी अस्पताल र कृषि ज्ञान केन्द्रमा कर्मचारी खटाए पनि अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा दुवै कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ ।
साविकका जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता भएका कृषक समूह, कृषि तथा पशु फार्म नवीकरण तथा दर्ता हुन नसकेको भेटरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. हरिबहादुर कुँवरले बताए । “सरकारले अख्तियारी नपठाउँदा कुन–कुन काम गर्ने भन्ने अलमल छौं,” उनले भने, “कार्यविधि नबन्दा चाहेर पनि कृषकलाई सेवा दिन सकिएको छैन ।”
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी कार्यालय स्थापनासँगै कर्मचारी खटाइए पनि कार्यालयका कर्मचारीले अख्तियारी नपाउँदा दैनिक कार्यालयमा हाजिरी गरेर फर्किनेबाहेक अन्य कामकाज हुन नसकेको भेटरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, बाँकेका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. कुँवरले बताए । उनले कार्यालय स्थापना भएको झण्डै दुई महिना भए पनि कार्यालयले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको अख्तियारी नआउँदा हाजिरी गर्ने बाहेक अरु काम नभएको बताए । अख्तियारी नपाउँदा कृषकलाई सामान्य सिफारिससमेत दिन नसकिएको बताउँदै उनले कार्यालय संचालनमा समेत समस्या भएको बताए । “सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेको त कुरै छैन । अख्तियारी नआउँदा एक पेज प्रिन्ट गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन,” उनले भने ।
भेटरेनरी अस्पताल र कृषि ज्ञान केन्द्रले प्राविधिक सेवामात्र दिइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए । उनले कृषकलाई दिँदै आएको सेवा, सुविधा केही दिन नसकेको बताए । कृषकलाई दिँदै आएको विभिन्न प्रयोजनका लागि दिँदै आएको सिफारिससमेत दिन नसकेको बताउँदै कार्यालयमा आएर हाजिरी गर्ने बाहेक अन्य कुनै काम नभएको बताए ।
साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्दै आएको विषादी र बिउबिजन बिक्रेताको फार्म नवीकरणसमेत गर्न नसकेको उनले बताए । “दिनहुँ दुई–तीनजना नवीकरणका लागि आउँछन् । कतिपयले फोनबाट सोध्छन् । अख्तियारी नआउँदा सबै काम रोकिएका छन्,” ढकालले भने ।
अख्तियारीको पर्खाइमा रहेको कर्मचारीले बताएका छन् । कामको टुंगो नलागेका कारण कर्मचारी घाम तापेर बस्न बाध्य छन् । “कामको टुंगो लागेको भए कामको मेसो पाइने थियो । कार्यविधि नबन्दा अफिस आउनेबाहेक अरु काम केही हुँदैन,” उनले भने ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी साउन महिनादेखि तलब, भत्ता खान पाएका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारीलाई पेश्की लिएर तलब खान भनेकोमा ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले नमानेको संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले योजनासँगै बजेट पठाउने भनेका कारण अहिलेसम्म तलबसमेत नपाएको प्रदेश नं. ५ का भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले बताए । “अहिलेलाई पेश्की लिएर तलब खान भनेका थियौँ, तर ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले मानेनन्,” उनले भने । उनले भेटरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यविधि तयार भइसकेको बताउँदै एक साताभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट र कार्यविधि पठाइसक्ने बताए । “कार्यविधि मात्र पठाएर नहुने भएकोले बजेटसँगै कार्यविधि पठाउने योजनामा छौं,” उनले भने, “अब आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, बजेट र कार्यविधि छिट्टै सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्नेछ ।”